Ukungasebenzi kwe-Pragmatic cache > UVielhuber David
Ukunikezwa kohlangothi lweseva manje sekuyingxenye yokubuyisa okujwayelekile kwamawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza. Iziphequluli ezifana ne-Google Chrome nazo zivame ukugcina i-cache ngangokunokwenzeka ukuze kuncishiswe izikhathi zokulayisha zamakholi aqhubekayo. Ukungasebenzi kwe- cache kwamafayela e-CSS / JS / image kungaxazululwa ngosizo lwe- mod_pagespeed , Expires / Cache control header, i- cache expression noma i-pragmatic kakhulu futhi ngqo ngamapharamitha ngamanye ngemuva kwegama lefayela.
Kunamasu ahlukene wokuthi ifayela kufanele lilayishwe nini noma cha.
Ukwahluka okulula kakhulu kulayishwa kabusha ngesicelo ngasinye. Ukuze wenze lokhu, umane ufaka intambo engahleliwe kufayela elizoshumeka bese uphoqa ukulayisha kabusha (lapha usebenzisa ifayela lesithombe njengesibonelo):
Uma lokho kuyinto enhle kakhulu futhi kunalokho ifuna ukulayisha kabusha lapho ifayili selishintshile, kusetshenziswa usuku lokuguqulwa kwefayela lokugcina (lapha kusetshenziswa isibonelo sefayela le-JS):
Uma usebenzisa ukuphathwa kwenguqulo njengeGit , ungasebenzisa futhi i-hash eyingqayizivele yesibopho sokugcina (inguqulo efushanisiwe yanele) (lapha usebenzisa ifayela le-CSS njengesibonelo):
I-WordPress inamathisela inguqulo yamanje ye-WordPress kuwo wonke amafayela ahlanganiswe nge- enqueue_style ne- enqueue_script ngokuzenzakalela . Ungashintsha lokhu kuziphatha ngqo kuzingcingo zomsebenzi njengengxabano, noma ungazibophezela emhlabeni jikelele bese usebenzisa eyodwa yalezi zindlela ezingenhla: